Products – KSL Company
သားသားလေးတွေ အစာမစားလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား?
အသီးအရွက်မစားချင်ရတာနဲ့ အသားမစားချင်ရတာနဲ့ ခေါင်းခါလက်ခါငြင်းနေတဲ့ အစားရွေးတဲ့ babyလေးတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရလား?
မပူပါနဲ့ Babyလေးတွေရဲ့မေမေတို့စိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက် Junior vit(Chewable)ဆေးလေးက စွမ်းဆောင်​ပေးမှာပါနော်
ဒီJunior vitဆေးပြားလေးရဲ့အရသာကတော့ သီးစုံအရသာလေးပါ ဝါးစားလို့လဲရပါတယ်နော်
Junior vitဆေးထဲမှာ Balance Vitamins,Minerals,Trace Elements အားလုံးပေါင်း (25)မျိုးပါပါတယ်နော်
ဒီJunior vitလေးကိုသောက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခံအားကိုလဲပိုကောင်းလာစေပါတယ်
Baby လေးတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ထက်မြက်လာစေဖို့ Junior Vitလေးက စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။
Teenvital မှာ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ် ၂၄ မျိုးတောင်ပါဝင်ပြီး အားဆေးတိုင်းမှာ ပါဝင်တာ သိပ်မတွေ့ရတဲ့ ထူးခြားစွာနဲ့ Lutein ပါဝင်ပါတယ်💁‍♂️
Lutein ဟာ မျက်စိတိမ်စွဲရောဂါအပြင် အခြားသောအမြင်အာရုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ မျက်စိကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမွန်စေတဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်💁‍♂️
Boron ပါ ဝင်လို့ အရိုးနဲ့ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကိုလဲ အားပေးပြီး Growth ဖြစ်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ကောင်းကောင်း ဖွံဖြိုးဖို့လဲ အထောက်အကူပေးပါတယ်💪💪
🤼‍♂️ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အရပ်ရှည်ဖို့က အဓိကကျတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ!!!
🤲လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ နေ့ စဉ်မရဘူးဆိုရင် အရပ်ရှည်ပြီး ဉာဏ်ကောင်း ကျန်းမာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်🤲
GMP (Good Manufacturing Practice) လတ်မှတ်ရရှိထားပြီး နိုင်ငံပေါင်း၆ဝကျော်ကိုဖြန့်ချီလာတာ နှစ်ပေါင်း၂၅နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ HealthAid (UK) မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်…
👨‍🎓👩‍🎓အရပ်ရှည်ပြီး ဉာဏ်ကောင်း ကျန်းမာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့Teenvital ကို တစ်နေ့ တစ်လုံး သောက်ဖြစ်အောင် သောက်လိုက်ပါနော်👨‍🎓👩‍🎓
သောက်သုံးပုံ။ ။ 📣အသက်(၁၀)နှစ်မှ(၂၀)နှစ်အထိတစ်နေ့တစ်လုံး မနက်စာ စားပြီးတိုင်းသောက်သင့်ပါသည်📣
🔵အမျိုးသမီးများအတွက် နေ့စဉ် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်များ စုံလင်စွာပါဝင်တဲ့ အပြင်
🔵သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ထိန်းညှိပေးဖို့နဲ့ ဆီးချိုရောဂါကာကွယ်ဖို့အတွက် Chromium
🔵ဆံပင်၊အသားအရည်နဲ့လက်သည်းခြေသည်းတို့လှပကျန်းမာဖို့ Biotin … စတဲ့ အဖိုးတန် သုံးမျိုးထပ်ပေါင်းတဲ့အတွက်
လစဉ် ဓမ္မတာလာချိန် ခံစားရသည့် ကိုက်ခဲခြင်း၊သွေးဆုံးကိုင် ဝေဒနာကိုခံစားရပြီး အစာစားချင်စိတ်မရှိ၊စိတ်မကြည်လင်သလိုခံစား ရတာ တွေကိုအထူးကောင်းမွန်စေပါသည်။
ဆေးတောင့် ၆၀ ပါပြီး ၂လစာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံထုတ် အဆင့်မြင့်အားဆေး Multimax Women
အကောင်းဆုံးတွေထဲက အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ဆေးများကို စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
မိမိ ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမည့် ဆေးဝါးများကို ရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ပုံများကို တပုံခြင်းထောက်ကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
**လက်လီ လက်ကားဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ *
🙏 ကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူရန် ရုံးခွဲလိပ်စာများမှာ
(google mapတွင် KSL Company ဟုရှာနိုင်ပါသည်)
အမှတ်(27) ပထမထပ် သံသုမာလမ်းမကြီးပေါ်၊မြင်သာလိုင်စင်ရုံးထွက်ပေါက်ရှေ့၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
🏠Mandalay ရုံးခွဲ- မန္တလေးမြို့……
(86လမ်းမပေါ် 46-47 ကြား အမှတ်(443) မြေညီထပ်၊ဘုရားကြီး အနောက်မုဒ် ၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်
ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းမွန်နေရင် ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်လာမည့်ေ ရာဂါပိုးများကို ၉၉% ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
🔵 ဘာကြောင့် QVITA multivitamin (ကျူဗိုက်တာ)ကို သောက်သုံးသင့်ပါသလည်း ?
🔹ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသောသူများ၊
🔹မျက်စိအမြင် မှုန်ဝါး အားနည်းသူများ၊
🔹အသီးအရွက်များကို လုံလောက်အောင် မစားသူများ၊
🔹 အာရုံကြော အားနည်းသူများ
🔵အသား၊ငါး လုံလောက်အောင် စားသောက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များကို ပြည့်ဝစွာဖြည့်ဆည်းပေးဖို့Q Vita Multi Vitamin ကို တ နေ့ တလုံး သုံးစွဲ ပေး ပါ။
🔵နေ့စဉ် အစားအသောက် စုံလင်အောင်စားသော်လည်းဗီတာမင်စုံလင်အောင် ပါဝင်မှု လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့်လိုအပ်သောကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရန်ှ
🔵Qvita အားဆေးတွင် (ကျူဗိုက်တာ)တွင် Vit C, B1, B2, B6, B12, Biotin, Vit A, D3, Vit E, B K1, Potassium, Iodide , Selenium, Zinc , Calcium , Manganese , Lutein တို့စုံလင်စွာပါဝင်ပါသည်။
Qvita Multivitamin ကိုတနေ့တလုံး ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချပေးခြင်း ၊စိတ်ကျရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပြီး တနေ့တာကုန်ဆုံးသွားသော စွမ်းအင်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းကိုယ်ခံအားမြင့်မားအောင် အထောက်အပံ့ပေးထားသောကြောင့် ဖျားနာခြင်းပင် မဖြစ်စေခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေနုိုင်ပါသည်။
🔵ကနေဒါနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်နည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ(FDA)လက်မှတ် ရထားသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် သောက်သုံး အားဖြည့်နိုင်ပါသည်။
တနေ့လျှင် ဆေး(၁) လုံး မနက်အစားစားပြီးတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့်လည်လိုအပ်သလို သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။ အသက် (၁၆)နှစ်အထက် လူမျိုး ဘာသာ မရွေးသုံးနိုင်ပါသည်။
ဆေးတဘူး(30 cap) 10000 ကျပ် (တသောင်းကျပ်)
🏠 အမှတ်(27) ပထမထပ် A- သံသုမာလမ်းမကြီး
လိုင်စင်ရုံးမှတ်တိုင်အနီး၊ ကညန လိုင်စင်ရုံးရှေ့
🏠 မန္တလေး /အမှတ်(443) ၈၆လမ်းနှင့် ၄၆ လမ်းထောင့် KSL Company ရုံးခွဲတွင်လည်း ရနိုင်ပါသည်။
(၁ရက်နေ့မှ ၇ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးတွင် KSL ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ချီသော ကနေဒါနိုင်ငံထုတ် Qvita multivitamin အားဆေးကို ပွဲတော်လာသူများအား တယောက်နှစ်လုံးစီဖြင့် မေတ္တာလက်ဆောင် ဆေးအလှူပေးလှူ ခဲ့ပါသည်။
ဆေးရရှိသောက်သုံးသူများသည် ဆေးကိုသောက်သုံးကြည့်ပြီးလွန်စွာကောင်းမွန်သော ဆေး၏အာနိသင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လွန်းသဖြင့် ရုံးသို့ ထပ်မံလာရောက်ဝယ်ယူကြပါသည်။
ဆေး၏ အစွမ်းထက်ပုံကို သုံးစွဲခဲ့ကြသော ဆရာဝန်များ ရဟန်း သံဃာ ကျား /မ တို့ကလည်း ကောင်းမွန်သော အားဆေးဖြစ်သည်ဟု တညီတညွှတ်တည်း ထောက်ခံရသည်အထိ(Qvita ကျူဗိုက်တာ အားဆေး) အလွန်အကျိုးထူးပါ၏။
ယခုလည်း မည်သူမဆိုQvita ဆေးအလှူတော်ကို(တယောက်၂လုံးစီ လာရောက်ယူဆောင် သုံးကြည့်စေလိုပါသည်)
လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေးသုံးနိုင်သော ဆေးဖြစ်ပါသည်။
💪 အမျိုးသားသုံး တိုင်းရင်းဆေး( ၃၅၀၀၀) ကျပ် 💪
ဒါလေးကတော့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ တော်တော်လူကြိုက်များတဲ့ မလေးရှားတိုင်းရင်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ FDA နဲ့ဆေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များရထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံ FDAလည်းရထားပါတယ်။အထုပ်ငယ်(9)ထုပ် ပါပြီးနှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြားသောက်သုံးပေးရင် (လန်းတယ် လန်းတယ် လန်းတယ်)
-Acai/Guaranaစသော အပင်တို့မှရသော သဘာဝအင်အားစုများကို တိုင်းရင်းသမားတော်များမှစနစ်တကျဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ကောင်းကျိုးများ- – – – – ♥️♥️
💊ဆီးကျောက်တည်ခြင်း နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေခြင်း
♥️အသည်းကိုငြိမ်းစေပြီး စိတ်ကျရောဂါကို တာဆီးပေးသည်။
♥️အရွယ်တင် နုပျိုစေခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို သန်မာပြီး အင်အားတိုးစေပါတယ်။(အထူးသဖြင့် ပန်းသေပန်းညိုး ပျောက်ကင်းသက်သာစေသည်)
ကိုဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်သလို KSL ရုံးများတွင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတပြည်လုံးကိုလည်း အိမ်အရောက်စနစ်ဖြင့် ပို့ပေးပါသည်။